ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒ - Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co. , Ltd.
ရက် ၃၀ ပြန်လည်ပတ်ခြင်းမူဝါဒအကြောင်း
ပြန်လည်ပေးပို့သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်လိုအပ်ပါကလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပြန်လည်တောင်းခံမှုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ။
1. အကယ်၍ ပရင်တာကိုဖွင့ ်၍ မရလျှင်၊ ပို့သောအခါပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ / ထုတ်ကုန်များမရှိပါကရက် ၃၀ အတွင်းပြန်လည် / ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်တင်သွင်းနိုင်သည်။
2.ကျွန်ုပ်တို့၏ 3D ပရင်တာထုတ်ကုန်များအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Motherboard၊ မော်တာ၊ ဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်နှင့်အပူအိပ်အပါအဝင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအတွက် ၁ နှစ်အာမခံပါသည်။ လက်ဆောင်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအာမခံမပေးပါ။
ပျက်စီးမှုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ရန်တောင်းဆိုမှုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ပရင်တာကိုယ်နှိုက်ကပြproblemနာမဟုတ်ပါကပို့ဆောင်စရိတ်မယူပါ။ အကယ်၍ စက်ကတရုတ်ကိုပြန်ဖို့လိုအပ်ရင်၊ အခွန်အခလည်းကျလိမ့်မည်မဟုတ်။
3. ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များ မှလွဲ၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်မလိုချင်ဘူး၊ အထုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ငြင်းပယ်လျှင် (သို့) ပေးပို့ပြီးသည့်နောက်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလျှင် (အသစ်သောအခြေအနေတွင်ရှိရမည်) ရောင်းသူနှင့်ရောင်းချသူမှပေးပို့သောအမြန်ကြေးကိုယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အထုပ်ပြန်လာ၏ကုန်ကျစရိတ်။
ပြန်လည်ပေးပို့မှုတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပြန်လည်ပေးပို့ပြီးသည့်နောက်ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိပြီးငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက် ၂၅ ရက်ကြာနိုင်သည်။
ဘာလဲ ထွန်း3D လုပ်ပါ
အကယ်၍ သင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာရှိပါက Facebook သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ TronHoo3D သည်ပြissueနာကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်အားဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် hardware ကို update လုပ်ရန်၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးရန်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးရန်သင့်အားလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်သင်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - Motherboard၊ nozzle Kit, အပူပါတ်ဘုတ်၊ ခင်းကျင်းပြသထားသည့် PCB board များ၊ ရက် ၃၀ အာမခံချက် (ပုံမှန် ၃၀ ရက်အာမခံချက်) ကိုခံစားနိုင်သည်
မှတ်စု: Hot Bed Stickers များ၊ nozzles များ၊ သံလိုက်ပြားများနှင့်အခြားအသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများသည်စက်ပျက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိပါကထိုအာမခံချက်မှအကျုံးမဝင်ပါ။
ဤပေါ်လစီအောက်၌ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းအားဖြင့်သင်၏အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ပို့ရန်လိပ်စာနှင့်အီးမေးလ်အပါအဝင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန် TronHoo ကိုသင်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပါမည်။
TronHoo မှအောက်ပါအခြေအနေများရှိပါကပြန်အမ်းငွေ၊ အစားထိုးခြင်းနှင့်အာမခံပြုပြင်ခြင်းကိုတောင်းခံနိုင်သည်ဟုအာမခံသည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုအောက်ပါအခြေအနေများတွင် ၀ ယ်သူက ၀ ယ်ယူရမည်:
● ပြန်လာသောပစ္စည်းများသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း TronHoo QC မှအလုပ်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။
● ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြန်ပို့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များ (အတည်ပြုထားသောအာမခံလုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပတွင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်ပြန်ပို့မှုများ) မဆို။
ဝယ်သူက ၀ ယ်သူ၏လုံလောက်သောအထောက်အထားကိုပေးရမည်။
TronHoo သည် ၀ ယ်သူများကထုတ်ကုန်ပြtroublနာကိုဖြေရှင်းသောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
ချွတ်ယွင်းသောပစ္စည်း၏အမှတ်စဉ်နံပါတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းမှုကိုဖော်ပြသည့်မြင်နိုင်သောအထောက်အထားလိုအပ်သည်။
TronHoo Official Store မှတဆင့်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူမှုများမှမှာယူသည့်နံပါတ်